Wararka Maanta: Khamiis, Apr 4 , 2013-Dowladda Jabuuti oo Gaadiidka Gaashaaman iyo kuwa Ciidamada Xamaara ugu deeqday Dowladda Soomaaliya (SAWIRRO)
Wafdiga ra’iisul wasaaraha oo maalintii labaad ku sugan dalka Jabuuti ayaa ayaa guddoomay gaadiidka oo ay ku jiraan kuwo gaashaaman, kuwaasoo loogu talogalay in ciidamada xoogga dalka lagu xoojiyo.
Munaasabad ka dhacday xarunta ciidamada ee Sheekh Cismaan ayaa waxaa heshiis ku kala saxiixday wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Faqi iyo wasiirka gaashaandhigga Jabuuti, Xasan Dharaar Hufane.
"Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dowaldda aan walaalaha nahay ee Jabuuti oo mar kasta nala garab taagan hiil iyo hooba," ayuu yiri Faqi oo sheegay in gaadiidkan ay u adeegsan dagaalka ay kula jiraan Al-shabaab.
Ra'iisul wasaare Saacid oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay taageerada Jabuuti, sidoo kalena tilmaamay in hubkan loo adeegsan doono si waafaqsan sharciga iyo nidaamka caalamiga ah.
"Gadiidkan guud ahaan waxaan u isticmaali doonaa sidii amniga dalkeenna aan ugu soo celin lahayn gacanta dowladda, waana bilow cusub, waana uga mahadcelineynaa dowladda Jabuuti," ayuu yiri ra'iisal wasaaraha, oo intaas ku daray: "Waxaan halkan ka cadeynayaa in hubkan aan u adeegsan doonno si mas'uuliyadi ku jirto."
Ugu dambeyn, ra'iisul wasaaraha Somalia iyo wafdigiisa ayaa xafiiskiisa kula kulmay ra'iisul wasaaraha Jabuuti, iyagoo kaddib soo kormeeray dekedaha Jabuuti, waxayna u kuurgaleen qaabka ay u shaqeeyaan dekedaha; iyagoo warbixinno ka dhageystay maamulayaasha dekedahaas.